Midlalo Ukutya Ukulahlekelwa ngumzimba Okufakiwe Protasov
Ixesha lokutya likaKim Protasov liiveki ezintlanu. Makhe sithethe malunga nokokupheka ngexesha lokutya ukutya kwe-Protasov. Isiseko salo sisekubakho ukuba kuyimfuneko ukutya imifuno eninzi kunye nemveliso yobisi ngendlela enokwenzeka, enomxholo we-fat - engaphezulu kwama-5%.
Eziphuzo ezifana neyeyi okanye ikhofi, zingadliwa zingenamkhawulo. Apha, kufuneka ubalekele ngonaphakade malunga noshukela. Umlinganiselo wamanzi okufuneka uchithe ngemini ngowama-2 ilitha. Kwakhona, ii-apula eziluhlaza zivunyelwe ngosuku.
Ngokuphathelele imifuno, iyakuthi idliwe ngaluphi na uhlobo kunye nobungakanani. Ukuba ufuna - ngoko ungadla iikomkom, ngelixa ufafaza nge-Bulgarian feta cheese, ekufuneka ibe nenqanaba le-fat content, ingabi ngaphezu kwama-5%. Kwakhona, ungadla utamatisi okanye iklabishi, ukutya ukutya kwi yogurt, unokulungiselela iintlobo ezahlukeneyo zealadi kwiintlobo ezahlukeneyo zemifuno, ufefe ngeeshizi kwaye uyihlobise ngeqanda elibilisiweyo. Emva koko, kunzima ukutsho ukuba ulambile. Le mveliso ingadliwa naliphi na ixesha losuku: kusasa okanye ebusuku.
Iingcebiso malunga nokusetyenziswa kwemveliso kwizigaba ezahlukeneyo zokutya.
Iveki yokuqala neyesibini ye-Protasov yokutya.
Ukuqala ngeveki yokuqala, kufuneka udle imifuno eluhlaza, ingakumbi engekho isitashi. Ungadla iintlobo zeentshizi kunye ne-yoghurts, umxholo wenqatha awukho ngaphezu kwama-5%. Umhla uvumelekile ukuba udle iqanda elibilisiweyo kunye nama-apula amathathu aluhlaza. Ikhofi okanye itiye ivumelekile ukuba isetshenziswe ngamanani amaninzi. Iimeko eziphambili, ngokuqinisekileyo, ukungabikho kweswekile. Umthamo wamanzi oyiphuza ngawo ngemini akufanele udlule ii-liters ezimbini.
Iveki yesibini kufuneka idlule, ilandela umzekelo wokuqala. Inyaniso enomdla kukuba emva kweveki yokuqala, uya kuphelelwa yilapho ulahlekelwa ngumnqweno, kukho enye into ngaphandle kweeshizi, ii-apula, i-yoghurts kunye nemifuno. Abantu abaninzi banokulahlekelwa ngumnqweno wokutya iqanda elibilisiweyo, elidliwa ngesidlo esikhethekileyo kwiveki yokuqala yokutya. Ekupheleni kweveki yesibini, unokuziva ukukhanya okungaqhelekanga kuwo wonke umzimba. Umzimba ongeyinyanzelo yenyama, i-carbohydrates eyongezelelweyo kunye neesekese, kuya kufuna ukunyaniseka kunye nokusebenza ngexesha. Ngaloo ndlela yokutya, kumanyathelo okuqala, kuya kufuneka usebenzise umlinganiselo omkhulu wenzame ukwenzela ukuba ungayiphuli imithetho yokutya.
Iveki yesithathu, yesine nelesihlanu yokutya kukaKim Protasov.
Ekuqaleni kweveki yesithathu, ngokuqinisekileyo kufuneka udibanise kwimifuno, ushizi kunye ne yogurt, isiqwenga somzimba othosiweyo, intlanzi okanye inyama. Kule meko, ubunzima bomkhiqizo abufanele kudlule i-300 grams. Unokwazi ukupheka inyama, ukuba awuyazi into yokupheka ekudleni iProtasov. Ngoku, kufuneka unciphise ukusetyenziswa kweeshizi kunye ne-yogurt. Imifuno, iitshizi, iimveliso zobisi, inyama kunye namaqanda, usadla iiveki ezintathu, emva koko, uqala ukutshintsha emehlweni abanye. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, ilahleko elithintekayo kakhulu lenzeke. Kufuneka ulungele ukuziphatha ngenxa yokuba ngokukhawuleza emva kokutya, awukwazi ukuxhamla kuzo zonke izidlo ezinqatshelwe. Abaninzi kufuneka bachithe umgudu omkhulu, ukuze badle isonka kunye nebhotela okanye inxalenye enkulu yenyama ebisiweyo.
Indlela echanekileyo yokuphuma kokutya kweProstasov.
Okokuqala, sithatha iimveliso zobisi ezinomgangatho ophantsi kakhulu we-fat content (0.1-0.5%), ngokuhlawulelwa, unokongeza ioli yeemifino kwiimali. Ngomhla, kufuneka ungadli ngaphezu kwe-15 g yeoli yemifuno, malunga neetapuni ezintathu. Esi siganeko kuyimfuneko ukutshintsha amafutha esilwanyana, imifuno. Ngokomzekelo, kwimimiselo emithathu yemihlaba, malunga nesigidi nesigamu amagqabi atholakala, kunye neetoni ezintathu. Ukuba udla iminqumo okanye i-almond, kufuneka uyanciphise inani leoli ngomhla owenziwe. Kubalulekile ukuqwalasela zonke izikhombisi zexesha. Kubalulekile ukusebenzisa okungaphezu kwama-25-30 amagremu weenqatha ngosuku. Oku kukuqwalasela ukusetyenziswa kwenyama, iimveliso zobisi kunye nemifuno.
Ii-apula ezimbini ziyakutshintshwa kunye neziqhamo ezizezinye. Kubalulekile ukuthatha indawo yabo ngesithelo esingenasiphumo, njengemango okanye ibhanana.
Ekuseni, endaweni yemifuno, sisebenzisa iphariji. Bala iipunipoli ezimbini zeesisitya kumlinganiselo ohambelana namanzi. Umthamo wokukhonza omnye akufanele udlule kuma-250 ml. Unokongeza i-cottage shiese okanye isaladi yemifuno kwi-porridge.
Emva koko, sishiya iimveliso zobisi ezinomzimba oqhenqileyo, inkukhu okanye enye inxalenye yeprotheni.
Iinjongo eziphambili ze-Protasov zokutya
Ukutya okunjalo kuyilungile kuba ayinakuyithintela inani elipheleleyo lokutya umntu angadla ngexesha lomhla. Le nzuzo inhle kakhulu, ukusuka kwinjongo yengqondo. Ukutya oku kulula kakhulu ukuxhasa abanye.
Ukutya kukaKim Protasov kugxininisa imetabolism, ekhokelela ekusebenzeni kwayo ngokuqhelekileyo. Ngenxa yokungabikho kwe-carbohydrate, i-pancreas izinzileyo kwaye ukuzingela ukusetyenziswa kokutya okumnandi kukudangala.
Ngenxa yokusetyenziswa okuzinzileyo kwemveliso yobisi, umzimba ufumana inani elifunekayo leprotheni, i-calcium kunye nezinye izinto ezincedo. Le ngeniso, ifake isandla kwi-accumulation of mass mass and loss of fat. Ukutya kulungiselelwe ukusetyenziswa kwemifuno engekho-starchy, kwaye le nto ininzi yamavithamini kunye nezinto ezilandelelanayo. Ngexesha lokutya, amathumbu asebenza kakuhle.
Ukutyiwa kwamafutha kulo mlo kuncinci, kodwa kungabikho ngokupheleleyo.
Ngokutsho kokutya kwe-Protasov, ukuvinjelwa kokutya inyama, kwiiveki zokuqala zokutya, kungenxa yokudla okungafunekiyo kwamafutha emzimbeni. Kubantu abaninzi, oku kutya akufanelekanga, ngenxa yolawulo lwawo oluzimeleyo.
Abanye abantu basebenzisa i-Protasov yokutya ukuze banqunyulwe umthwalo weeseksi kunye nemveliso yefowuni ngaphakathi kwabo. Ingaba abantu abasemgangathweni ekudleni okunjalo. Inketho enokwenzeka ngayo kwesi sixazululo sinokuqala kokutya emva kweveki yesithathu, kwaye ke, uye kwenye ipula enye, kunye nokufakelwa kweziqhamo ezizezinye, ioli kunye nemveliso ye-cereal. Ngoko, uqulunqa imodeli yakho yokutya. Okanye ungaqalisa ngokukhawuleza ngeendlela zakho zokutya.
Ukutya ngokufanelekileyo iProsovava
Indlela yokwenza iindwangu ezintle, ezakhayo?
Ukuthintela iindinyana zeendinyana kwi-call last-2017
I-pizza kunye ne-basil kunye nama-mushroom ehlathi
Indlela yokukhetha i-clutch efanelekileyo kwicala: le migaqo-4 iya kunceda ukuba ungaphutha!
Izitya ezona mnandi, zokupheka
Iingqalekiso: ikhaya, abazali, icawa
I-omelette ene-parsley kunye no-onion eluhlaza
Ikhekhe kunye neebhanana ze-carameli